Posted by ဇနိ at 1:34 PM
အိမ်လွမ်းသူ(မှန်နီကုန်း) October 28, 2008 at 2:44 PM
ဟွန်....! မဇနိကလဲ လက်ဖက်နှပ်တာ ...ဘယ်လိုနှပ်သလဲဆိုတာတော့ မပြောဘူး။
လက်ဖက်ကလေးတွေ က စားချင်စရာကောင်းတယ်ဗျ...။လုပ်ပါအုံးနောက်တခါ.. ဘယ်လိုနှပ်တယ်ဆိုတာလေး ကို...စိတ်ဝင်စားလို့ပါဗျ..။
Anonymous October 28, 2008 at 2:52 PM
လဖက်နှပ်ထားတာလေးကို ထမင်းလေးနဲ့ နယ် နှမ်းလေးဖြူးပြီး လဖက်ထမင်းစားချင်စိတ်ပေါက်သွားပြီ။
Republic October 28, 2008 at 4:42 PM
မမကွိ ရေ ၊၊ စုံလင်လိုက်တာဗျာ ၊၊ မမနိ ဆီမှာ စားစရာတွေ စုံတယ်ဗျာ ၊၊ ပုံထဲ က လက်ဖက်နှပ်ကို စားချင်တယ် ၊၊ပို့ပေးပါ ၊၊ ကွိကွိ
nu-san October 28, 2008 at 4:57 PM
မဇနိရေ... လက်ဖက်နပ်က လူကြီးကြိုက်လေးနော်... စားချင်တယ်..အိမ်လာလည်ရင် ကောင်းမလားဟင်.. :P အဲဒါတွေက ဒီမှာ ရွှေထက်ရှားတယ်.. မစားရက်ဘူး.. ကိုယ့်အတွက် ရှားပါးတဲ့အစားအစာတွေ ဆိုရင် ဖဲ့စားရတယ် ကုန်သွားမှာစိုးလို့.. မဇနိက ချင်းအတော်ကြိုက်တယ်နော်. အမကတော့ ပူလို့ သိပ်မစားနိုင်ဘူး.. ချင်းသုပ်တော့ တခါတလေ သုပ်စားဖြစ်တယ်... ဒီမှာမဟုတ်ဘူး.. ရန်ကုန်မှာ ယောင်းမသုပ်ကျွေးတာ.. :D
PAUK October 28, 2008 at 5:29 PM
May Moe October 28, 2008 at 5:30 PM
မမနိ ရေအပေါ်ဆုံးက ပန်ကန်မသွားပြီ။ သူက အိမ်မှာနှပ်တဲ့လက်ဖက် ပဲကြိုက်တာ သာမီးကလဲ မလုပ်တတ် ဟီးး အိမ်နီးရင်လာတောင်းစားမှာ :D
khin oo may October 28, 2008 at 6:47 PM
တှို့ ကတော့ အာသာ မပြေဘူး တကယ် မစားရလှို့ ။
mgngal October 28, 2008 at 9:25 PM
နောက်ဆို အစားအသောက် ပို့ စ်တင်ရင် လာမဖတ်တော့
ဘူး ။ (နေနိုင်တာလည်း မဟုတ်ဘူး ) :D
မစားရ အညှော်ခံတောင် မဟုတ်ဘူး ၊ မစားရ ပုံကြည့်ပြန် ဆိုသလို ဖြစ်နေပြီ ။ အနံ့ လေးရရင်တော်သေး။
Yu Wa Yi October 28, 2008 at 11:06 PM
မနက်ဖြန် သွားဝယ်စားဦးမှပဲ နိနိရေ။
မောင်မျိုး October 29, 2008 at 5:28 AM
မမနိ ကျနော်က အရမ်းကြိုက်တာ အခန်းမှာဆို နှစ်ပြန်ကြော်ထုတ်အမြဲရှိတယ် လက်ဖက်ထည့်မသုတ်စားဖြစ်ရင် ဒီတိုင်းပဲထိုင်ဝါးပြီးရေနွေးနဲ့ သောက်နေလိုက်တယ်။ ပုဇွန်ခြောက်လေးနဲ့ ဆိုပိုကောင်းတယ်နော့် ကြက်သွန်ဖြူလေးနဲ့စားချင်လာပြီးဗျာာာာာာာာာာ။
တန်ခူး October 29, 2008 at 4:58 PM
နိနိရေ… ဒီမှာ ဂျပန်ဆိုင်သွားစားရင် ဂျင်းချဉ်လေး အမြဲရှိတယ်…ပန်းရောင်လေး… အမက ဂျပန်မှာ ဂျင်းနုပေါမယ်ထင်နေတာ… လဘက်လေးနှပ်ထားတာ စားချင်စရာလေး… အဲဒီလို အရွက်ပုံမပျက်ပဲ အညွှန့် လေးအတိုင်း နှပ်တာ အမလဲကြိုက်တယ်… ဒါပေမယ့် အကြိုက်ဆုံးကိုမှ စားလို့ မရတဲ့ ဘ၀လေ…
Moe Cho Thinn October 31, 2008 at 2:12 AM
လက်ဖက်ပွဲအခုမှ မြင်တယ်။ သူများတွေ ဦး ကုန်ပြီတော့။
ဒါနဲ့ အရွက်မပျက် လက်ဖက်နှပ်လေးနဲ့ ပုဇွန်ခြောက်နိုင်းချင်းကို ပန်းကန်ပဲ လျက်သွားတယ်။ မတတ်နိုင်ဘူးလေ..။ :D